Uummata keenya irratti yakka diini rawwatu dhuga itti himu qabna. Kutaa 2faa
Habashan hundi meesha fi dandeeti isaa hunda fayyadame nuti dullee jira
Dullaa kana irratti namni hin hirmatin hin jiru, dhaabbilee habasha hara fi habasha moofa, media habasha, bareesitoon habasha , “hayuun” habasha hundi nuti dulan jiru. Oromoon waan of gaafachuu qabu jari kun TPLF angoo qabate jiru dhisan Oromoo du’aa jiru irratti maliif dulluu jeedhe of gaafachuu qaba. Qamni ykn namni utuu Oromoon haala kana keessa jiru dullaa Oromoo irratti geggesu atamin Oromoo waliin hariroo uummate nu wajjin lola jeetan yaaduu. BADEN dhaabbni Amhara kan EPRDF keessa jiru yeroo amma kana TPLF jala bu’ee OPDO irratti dullaa akka jiru qabataman odeefama jira, warrii ala kanas waanuma warrii isaan biyaa keessa gocha jiran gocha jiru. Kun amma TPLF ango irra akka turu godha malee waan isaan fayaduu hin qabu. Oromoon itti fayadamuu batuus ammas Jokerin afur (4) nuu harka jira. dhabbileen Oromoo tokko tane diina akka monu utuu beeknu wal faacafne habasha jala seenee caaraa Oromoo diinaaf keenuun seena biratti akka nuu gaafachiisu beeku qabna. Habashan kaayyoo haqa, kabajaa mirga dhala nama hin qaban.
Dhaabbilee Oromoo kaayyoo haqa, Amala warraaqaa, Eenyumma isaan Oromummaa waan hunda dursa keenuufi qabu kan jeenuuf kanaaf. Dhaabbi ykn Ooggansii kaayyoo haqa (kaayyoo saba irra xiyeefate) Amala warraaqaa hin qabne, Eenyumma saba isaa fi rakko fi gidiira saba isaaf furmata barbaaduuf hunda dura dursa kan hin keeninef saba isaa bilsummaa dhugati hin fidu. Kun lafumaa kane miti kan duubaacha jiru Qoorannoo siyaasaa Addunyaa gonetu ifati nuti mulisa jira. Fakeenya murasa isiin kasuu yoo barbaachiseef biyyaa Afrika ykn Biyaa Esia keessati saba keenya Bilisummaa bafne jeedhani warraa dhadatan yoo ilaale haali saba bilisumma baa’ee jeedhamu sun nama gadisisa:-
TPLF guyyaa angoo qabate kasse waan isaan hojjeeta jiran biyyaati hiyeeti waan isheen qabduu fi maallaqa garggarsa biyyaa ala irra argamuu hunda gargar qoodatan Oogannon TPLF Addunyaa irratti tujaroota yamuu ta’aan sabi milliyona 20 Ethiopia keessaa beelaaf saxilaman jiru, isaan garuu guyyaa dhabbii isaan dhabbate waggaa 42ffaa bara 2017 biyya arabaatti geggefata jiru, Ooganooti fi Miseensoon Olanaan TPLF kumatama biyya arabaatti xiyyara heddun kontorata fudhani geesun achi torban tokko hotela jirachisun maallaqni ba’uu Uummata milliyoona 20 beelaa fi dheebun dhuma jiru sun lubuu olcha ture, Haile silasen utuu Wallon beelaa’uu saree isaaf guyyaa dhaloota kabajeef TPLF Beela Uummata miliyoona 20 irrati dhichiisa jirti.
Uummani Zimbabuye wagoota hedduuf warra Adi garbonfata irra qabsa’aa baa’ee bilisumma baa’ee jeedhamu hara’a mal keessaa akka jiru isunumti tilmama.
Uummani Kibba Afrika Aparthaid irratti qabsoo bara dheera geggese bilisumma ba’ee jeedhamu ammalee jreenya isaa dura gadi jirata, bilisumma warrii baa’ee Oogannoota ANC warra akka Prezidaanti Jacob Zuma wagoota murasa keessaatti billiyener taa’an yoo taa’ee malee Uummani akkuma garbometi jira, waan jijjirame hin jiru.
Qabsoo yeroo dheera booda Bilisumma isaa kan labsate Uummani Angola qabeenya nama tokko taa’ee hafe.
Prezdantiin Gambiya Yahya Jammeh wagoota 22 biyyaati warsha mata isaa goodhate ture.
Eritrean waga 30 lolte ilee Bilisumma booda jijjirami saba sanaf dhufe hin jiru akka Ethiopia samiichi fi malamaltumman hin jiru yoo ta’ee ilee mirgi sabiicha siiriti egameera jechun hin danda’amuu;
Biyyootin Esia kan akka Phillipns, Barma, Bangladesh, fi Pakistan Uummati isaan ammailee jireenya garbuman gadii jiraacha jira.
Biyya Arabaa duratu waa’ee mirga saba isaan fi mirga dhala nama warra hin beekne akka binensa dagalaati warra yaadan horiidha. Heera Addunyaa warra hin beekne safuu kan hin qabne, hiiyeessa humna hin qabne, fi dubartii humna hin qabne haaduun morma kutani warra ajjeesan dha. Addunyaa irratti dubartoon mirga isaan sarbame garbuma jalati kan jiratan biyyaa Arabaa keessaatti.
Kana hunda kan kaafnef biyyii kun hundi Party (dhaabba) qabu garuu dhaabba kaayyoo sabaf dhabate, dhaabba amala waarraaqa qabu ykn safuu Uummata ilee kan eguu miti. Unni ilee haruma wal gorsuu fi rakkoon akkasi akka jiru barsisu yoo bane, namichi haraa busii Uummata irra hatachuu egalee bori yoo Ooganna biyyaa ta’ee mal goodha jenne yaaduu qabna. Ooganni Haraa utuu hin bilisoommin angoo irra bu’uu koo irra du’uu na wayya jedhu utuu bilisoommne mal nu goodha jenne yaaduu qabna. Oogannii media ijarate haraa ofuma isaati ittin dubatuu utuu Bilisommne demokrasii fi mirgi uummata atami goodha lata jenne yaaduu qabna. Warrii qabsoo fi Dhaabba PLC isaan goodhatan wagoota dheera anna malee namni birran hin jiru jeedhan dhaabba duu’aa irra taa’ani utuu bilisoommne iyuu biyyaati ajjeesuu. Qabsa’an Mootumma jijjiruuf qabsa’uu inni iyuu utuu of hin jijjirin mootumma inni jijjiruuf deemu yeroo 2 jijjiramee jedhe Uummati warra itti kolfutu jira. Mootumman Fillaannon jijjiramuu qaba jeedhu warrii mootumma morman isaan iyuu dhaabba isaan keessaatti fillannoo fi jijjirama utuu hin fidiin mootuuman tokko dulome du’ee yeroo jijjiramu argina kana jeechun isaan ilee utuu angoo qabatani kanuma goodhu jeechudha.
Kun hundi Addaa Habasha fi Addaa siirna garbonfatootati malee addaa Oromoo miti. Warrii habasha Angoo qabatan bara dheera jirachuu qoofa utuu hin tane samiicha ajjeechaa mirga nama dhiibu kkf hojii suukanessa hojjeetu kun caalisame waan ilaalamu ykn obsaan waan bira darbamu miti.
Oromoo irratti yaakki kara hunda raawwatama jiru qabsoo keenyan dhabaachuu qaba inns:-
- Oromoon biyyaa isaa irratti akka Binensa ajjeefamuu, hidhamuu, dararamuu, samamuu fi biyya ari’atamun tokkumaa ijoollee Oromoon dhabaachuu qaba;
- Qabsoo keenya Afaan Oromoo Ethiopia fi Finfinnen Afaan hojii biyooleessa taa’ee ijoollee Oromoo Qubee Generation hojii bakka barbaadan akka hojeetan goochu qabna, ijoolleen Oromoo matan ishee gadii jeedhe ol jeedhe adeemuu qaba.
- Finfinnen Oromoo irra fudhatamte Oromiyyaati diina tate Bishan qulquuluu fi Midhan nyata Oromiyaa irra argate xurii fi balfaa Oromiyyaati gadi dhiftu, Oromiyaa jalaati deebite jirachuun mirga Oromoo, addaa fi Afaan fi qabeenya Oromoo tiikkisu qabdi Finfinnen kan Oromoo qoofa ta’uun ishee labasamuu qaba.
- Samiichi bara dufa darba Amhara fi Tigiren Oromoo irratti raawwatama jiru yeroo dhumaaf buqa’uu qaba, jijjiramii bu’uura Gaanfa Afrika keessaatti dhufuu qaba.
- Dangaan Oromoo inni dhugan Gaanfa Afrika keessaatti dangeefamuu qaba.
- Tigiroon hanga bokokan tarsa’anti yeroo soroman (dureessaa ta’an) Oromoon ammoo beellaa fi gadadumman huqate hanga adeemu dadhabuti ga’ee jira, rakkoo kana keessaa saba keenya basuuf Oromoon hundi murte isaa dhumaa hanga warreegama lubuuti of irratti murtesuu qaba, malee garbumma jala taa’ee waa’ee Amanta fi ilaalchaa lalabuu hin qabu. Kun hund Bilisumma fi walabummaa oromoo booda hund isaa ni siirata kana of amansisuu qabna.
- Oromoon gaafa Finfinneen dhufu Nama amaya (Salaxanku) jeedhe Afaan Amhara dubatu, Oromoo gaafaa USA deemu ani baradhe ykn Hayuu of goochuuf Afaan Englishin qoofan dubachu fi bareesu egalu Oromumumman isaa dheedhi jeechu dha, bilchachu qaba, Oromoon bakka nama lama ol ta’’eti Afaan Oromoo dubachu qaba, waltajii Oromoo kamiyuu irrati afaan Oromoo dubachu qaba.
Kana dura Oromoon waan mariiti hin dhiyeesine qaba yaada jeedhu dhaabbilee Oromoof dhiyeesun keenya ni yaadatama innis Bilisummaa fi Walabummaa Oromiyaa mirkanesu, Afaan Oromoo Afaan Gaanfa Afrika goochu,Finfinnen kan Oromoo qoofa ta’uu ishee, Danga Oromoo isaa dhuga dangeessuu fi kkf bareefamn fi gorsi dhaabbilee Oromoof dhiyate ture. Dhaabbileen Oromoo yeroo heddu ibsa basan irratti waa’ee Oromoo akka qoosati ykn akka salphati diina Oromoo birrati dhiyeesani waan diini jeedhu yeroo fudhatan argina. Dhaabbilen Oromoo walii keenyati akkas gara walti jabane waliif galuu kan diidinu diina waliin garuu guyyaadhuma tokkooti marii sa’a murasatiin waan diini jeedhe hunda fudhatani yeroo waliif galan argina. Kun gaafii Dhaabbileen Oromoo hundi of ilaaluu qabandha. Namni atamiti lammii isaa caalaa diina amana? Diinafi obsa arganee walii keenyaf atamti obsa waliif dhabne? Miseensoon fi Oogannoon dhaabba kana irratti gadii fageenyan mari’achuu qabu. Oromoon nama angoof qabsaa’uuf nama bilisummaa saba Oromoof qabsaa’uu addaa baafate beeku qaba yoo kana hin beekne kara dheerraa erga deemani bodetti deebii’ani tokko jeedhan adeemsa eegalu taa’aa.
Mootummaan Addunya, EU fi USA wagoota baayee rakkoo Oromoo itti iyyata turre, garuu TPLF resulution (akkekaachisa) itti bareesun ala murte cimmaa ykn qoqoba dinagde ilee irratti goodhan hin beekan. Kun kan mulisu Warrii dhihaa fayyida mata isaan malee fayyida enyuu ilee akka dhimma isaan hin tane ni beekna. Garuu utuu abdi hin kutaatin jala adeemne rakkoo Oromoo kan itti ibsinuf gaafa guyyan dhufe dubbin galaagale nuu tarkanfi fudhachuu egale waan haraa isaanitti taa’ee saba keenya akka hin mineef. Maallaqa isaan liqii fi garggarsa jeedhan TPLFti guura jiran Oromoo birra gaa’ee akka hin beekne, Maallaqa kana Oogannoon TPLF qoofan kan itti fayadaman fi ishee Hafte ammoo EEFRT kennan Warshaa Kemiikallaa (chemical industry) ijarraacha akka jiran. lafaa Oromoo fi qabeenya Oromoo hara’a isaan gurguurachaa jiran seera qabeessa akka hin tane fi Investeroon EU fi USA addunya mara irra Ethiopia deeman kara malaamaaltumma lafaa keenya irra Oromoo buqisaa jiran seera qabessa akka hin tane itti himuuf malee garggarsa meesha ykn maallaqa isaani irra argachuuf miti. Walumagalati qabsoo goonu keessaati hawwassa addunya fi motuummoota Addunya irra ammaf waan arganu akka hin jire hubane qabsoo Qeerroon Oromoo dhiiga isaa itti kafala jiru sana biffa adda addaan irratti hirmane garggaru qoofa. Dhaabbileen Oromoo tokkuumman kaayyoo Uummata Oromoo kabajjanii qabsootti yoo seename qeerroon Oromoo fi Uummani OromooTPLF of keessaa basuuf humna fi hamilee guutu qaba.
Tigiren wagoota laman darban keessaati Oromoo kuma afur (4,000)ajjeefte jirti, kuma dhibba tokko(100,000) mana hidhati darbitee jirti, Ma’ikalawii keessaatti Torchi ykn reebbichan kan dubachuu hin dandeenye dhiiba (100) tuu jira maqaa isaan harka qabna,
Kanaafuu Oromoo kan tatee hundi Hommisha Tigire, waan Tigiren harkan qabde Dhiiga uummata Oromoo siiti haa ta''u yoo itti fayadamte, Dhiiga Uummata Hararge, Balee, Boranaa fi guutumaa Oromiyaa keessaati dhiiga dhangalasa jirtu akka nyateeti waaqni Oromoo siin haa gaafatuu. Oromoon lolu danda'uu lola Somale liyuu polsi fi Agaziin Tigire Oromoo irrati banan kana irrati argame lolu qaba.Yoo Hararge deemte irratti loluu batee ilee hommisha Tigire waan Tigire hunda (boycott) lagadhu:-
1. Meeshaa (Hommisha) Tigire irra hin bitiin itti hin gurguriin bu'aan isaa siiti haa hafuut,
2. Banki Tigireti hin fayadamin, Maallaqa Banki TPLF keessa qabdan basa,
3. Mana Tigire hin kireefatiin, Hotela Tigire hin buliin,
4. Konkolata Tigire hin yaabiin,
5. Tigire waliin hin waqeefatin, Mazgida fi Churchu (walda) Tigire itti waqeefatuu hin deemin,
6. Mana Nyata fi Dhugati Tigire seente hin nyatiin hin dhugiin dhiiga siiti haa ta'uu,
7. Dubara Tigire hin fudhiin hin fironfatiin, Dubarti Tigire yoo mana qabate of irra gegges, diina hin amanin
8. Du’agaii Tigire hin ga'iin ciidha Tigire hin deemin,
9. Tigire Harka qabdee hin dubsiin,
10. University fi Collage Tigireti hin baratiin,
11. Tigire FB, Paltak, Email fi media kamiinu hin qunamiin yaada kee hin keninif,
12. Maallaqa biyyaati hin ergiina, yoo rakkoo ta’ee ergitan ammoo kara bank utuu hin tane kara nama dhunfa erga.
Oromoon waan beeku qabu, Masqali Habasha dhungacha Habasha irratti qabsaa’uun hin fakkaatu, Habasha waliin rafa (bula) habasha irratti qabsaa’uun hin dandaa’amu, diina boobake jala dura basuu qabda kana goochuuf ammoo muratefate of bilisommsuu qabda.
Duri Hawwasii Oromoo Oromumman gurma’ee ABO deggera ture barota dhiyoo kana garuu hawwassaa Oromoo digani Amanta jalati gurmaa’an jiru, Median ilee yaada nama kan fudhatuu amanta Ooganii isaa hordofu irratti hunda’eti, dhaabbiileen siiyaasaa fi hawwassa Oromoo keessati amantan kan dhuunfa abaa ta’uu dhisee siyaasaa fi qabsoo Oromoo irratti dhiiba kan goodhu yoo taa’ee kun bala TPLF caaluu nuti ta’uuf adeema. Oromoo maqaa amantan wal qoqode qabsoo Bilisummaa Oromooti gufuu ta’uun nama gadisisa. Rakkon Oromoo rakkoo Abba biyyumma fi rakkoo Eenyuma keenya molqammuti male rakoo amanta miti, rakkon amanta yoo jirate ilee gaafa Oromoon bilisomme hikama, rakkon amanta Ethiopia keessa jiru hundi hikamu akka danda’uu beeku qabna. Qabsoon Guyyaa gutuu fi Halkan gutuu Onne gutuun kan yaadani hojeetan malee waan gaafaa haali nama mijate hojeetan gaafaa namati tolu dhisee ammoo dhisan miti, saba keenya Garbumma jala basuuf murannoodhan itti adeemuu qabna